Ụbọchị ndabere ụwa - Ugbu a oge ya iji were nkwa ahụ
Ụbọchị Ndabere Ụwa - Enwere m obere oge na nwata, na otu n'ime ihe ndị dị mkpa ịchọrọ ịkọ mgbe ị na-achọpụta otú ị ga-esi na-ebugharị traktọ bụ ụzọ ị ga-esi gbadaa. Ụbọchị ole na ole m na-aṅụ iyi na ọ na-egosi na ị na-agbadata karịa ị na-aga n'ihu. Echere m na ụzọ ahụ na-arụ ọrụ ugboro ugboro, nakwa.
Na teknụzụ nke ụwa, ịga ala, mgbe ị na-edegharị ma ọ bụ tinye data gị, bụ ihe dị mkpa. Na ohere na data dị oke egwu maka ọrụ gị, ị ga-eji ya akwado ya ugboro ugboro. Na oge ahụ, ọ bụrụ na enweghi mmechuihu na ihe na-akpata nsogbu data, ị na-agbakeghachi data gị site na ndabere ọhụrụ. Ọ nwere ike ịbụ usoro ndụ.
Nke a bụ ihe mere ọ dị mkpa iji chọpụta okporo ámá nile nke March 31, World Backup Day.
Ọ na-ada ụda nke ọma, ma ịgafe data gị nwere ike ịba ụba ma dị egwu. Ọ bụ ezie na DVD data na-adọrọ adọrọ, ọkpụkpụ siri ike dị elu pụrụ ịdị ọnụ n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ha dị oke ọnụ karịa ka ha dị afọ ise gara aga. N'ụzọ dị mma, ọ dị ka igwe na-agbakwụnye ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga na ndabere, ị ga-achọ ọtụtụ ikike. N'ịkwado data ị nwetara, ọ bara uru ịmara na ndabere gị nwere ike iwe oge.
N'ọnọdụ ọ bụla, ugbu a n'oge ọ bụla World Backup Day na-agba gburugburu, ana m agbalị ịchekwa ndabere nke kọntaktị m, ozi, otu afọ tweet, na ihe ndị ọzọ niile m nwere. Agafere m ụbọchị ụwa azụ azụ afọ anọ tupu mụ agaa ahịa na Twitter. Malite n'oge ahụ gaa n'ihu, achọpụtawo m na nkwado ndabere m dị iche na ọdịdị na enweghị nchekasị nke idebe "ihe niile m na-etinye na ya n'otu ebe." Ụdị ọnọdụ ahụ ga-akpata nsogbu dị iche iche maka ụzọ.
N'otu aka ahụ ka ị na-elele anya ọkụ gị ma gbanwee batrị oge ọ bụla Mgbazinye Uhie na-eme, ana m etinye onwe m ka m wepụta oge maka ihe mgbochi ndabere m nwere kwa afọ na World Backup Day. Ọbụna m setịpụrụ ya dị ka ụbọchị niile na akaụntụ Outlook m. Nke a nwere uru ọzọ iji chebe ndị mmadụ ịnakwere m gaa mgbakọ!
Dị ka ihe dị oke egwu dịka ọ bụ iji dozigharị ọrụ data, m na-eme ka ọ bụrụ ihe na-egosi na m na-emekọ data m, yana. My gigabytes nke ndekọ onye ọ bụla dị ka ihe dị mkpa, ya mere foto ndị ezinụlọ, ndekọ ụlọ, akwụkwọ ikikere, ozi, na 80s-music remix mp3s gbakwunyere mgbarụ na-agagharị na DVD data, na igwe ojii, na n'elu diski ike.
Eziokwu mara, enwere m obi uto n'inwe nnukwu nkwado ndabere. N'ịbụ onye ahịa Mac, nkwado ndabere na-adịrịrị mfe, ugbu a ígwé ojii emeela nkwado ndabere na ọ bụ ihe na-adịghị achọ. Site na mkpochapughị iwu maka mmerụ ma ọ bụ ma eleghị anya na m ga-achọrọ ụfọdụ data site na oge gara aga, enwere m ike iweghachite data m. Ọ bụ otu n'ime di na nwunye ndị ahụ nọ na ndụ; ọ dabere n'ebe ahụ maka m.
Ikwu okwu banyere njigide, World Backup Day bụ ohere ọzọ ịja mma maka ndị na-enye nsogbu maka mgbapụta maka mkpakọrịta gị. Ịmepụta atụmatụ dị iche iche nke mgbapụta dị egwu ma ọ bụ dị mfe. Ihe a na-eme ma ọ bụrụ na ị na-emekọrịta ihe na-adabere na nkwado dị ike na mgbake, n'ihi ya, ịghọta ụbọchị a bụ ihe dị mkpa banyere ụzọ isi gbadaa data dị ka ọ na-aghọta ndị na-enyere anyị aka mgbe data fiasco kụrụ.
Ya mere, na March 31 ma ọ bụ ụbọchị kachasị ọhụrụ nke ọnwa ọ bụla, gbalịa ịdata ndekọ gị. Ị nwere ike ịghachite nkwa nkwaghachi Ụwa nke ụwa site n'ịgbatị aka nri gị ma gbanwee ya, "M [aha gị] nkwa siri ike ịkwatu akwụkwọ m dị mkpa na ihe ncheta dị oké ọnụ na March 31st."
Ngwọta Ngwá Ọrụ Ọhụrụ rịọ ka ị na-eburu n'uche na ị na-egweri, kụziere ndị ị hụrụ n'anya banyere World Backup Day kwa n'eziokwu nke na ndị enyi anaghị ahapụ ndị enyi n'enweghị nkwado.
Esi agba ọsọ Linux na Azure, Nkebi nke M: Isi ihe